သျှမ်းနီလူမျိုးတုို့၏ အုိုးစည်နုိုင်ငံတော် | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
Posted by shannnews at 9:03:00 PM0comments
တုိုင်းလျဲန်ခေါ် သျှမ်းနီ တုိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသည် မုိုးကောင်း ၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးမိတ်၊ ၀န်းသုို့ သျှမ်းအခေါ် မိန်းကောင်း (ဗုံမြို့)၊ မိန်းယမ်း (ဗျိုင်းမြို့)၊ မိန်းမိတ် (ဓါးမြောင်မြို့) ၀မ်းဆေ (ကျားကွင်းမြို့) စသည့် မြို့ပြ လက်နက်နုိုင်ငံငယ် ( City State ) များကုို ထောင်လာခဲ့သော သျှမ်းညီနောင် သုံးဦးမှ ဘုိုးတော် ဂနာလရာဇ်တုိုင်း ရွီးရွှမ်း ဘုရင်မင်းမြတ် ဦးတည်မင်းထံ လူသူလက်နက်များ တောင်ခံကာ စတင်တည်ထောင် လာခဲ့ကြရာမှ ပေါက်ဖွားဆင်းတက် လာသော သျှမ်းမျိုးနွယ်စုများဖြစ်သည်။ (သျှမ်းသမုိုင်းက အခုိုင်အမှာပြဆုိုသည်။)
သျှမ်းနီနုိုင်ငံတော်ကုို အချို့သမုိုင်းဆရာများက မုိုးကောင်းခေတ် ဟုခေါ်ဆုို ရေးမှတ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့သမုိုင်း တလျှောက်တွင် မုိုးကောင်း မုိုင်းညှင်း၊ မုိုးမိတ်၊ ၀န်းသုိုနေ သျှမ်းနီများကုို မောသျှမ်းကြီးများဟုလည်း ရေးလေ့ရှိသည်။
ရှေးခေတ် ဝေါဟာရအားဖြင့် ကျိုင်းဟုန်ဟု ခေါ်သော မုိုးမိတ်မြို့ကုို ဗုဒ္ဓသာသနာ သက္ကရာဇ် မတိုင်မီ ၁၄၈ (ခရစ်သက္ကရာဇ် မတုိုင်မီ ၉၉၂ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနုိုင်ငံ သမုိုင်းအဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဌ (၂) နုိုင်ငံခြား ဘာသာ သိပ္ပံကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ဟောင်း ဆရာကြီး ဒေါက်တာ စုိုင်းအောင်ထွန်း ရေးသားပြုစုသော တုိုင်းလူမျိုးစုများ ပြန့်နှံ့ နေထုိုင်ပုံ သမုိုင်း စာတမ်းတွင် လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ(၂)တွင် စကုဒေသသည် AD 1120 မှစ၍ ခန္တီးသျှမ်းတို့ နေထိုင်ရာေ ဒသ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူ့သမုိုင်းတုိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှုကုို လေ့လာရာတွင် မိသားစု အစုအဝေးမှ တဖြည်းဖြည်း တုိုးတက်လာပြီး မြို့ပြနုိုင်ငံ (City State )၊ မင်းပြည်ထောင် (King Dam)၊ လက်နက်နုိုင်ငံ (Empire)၊ ဟူ၍ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။
2.အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား ( Nobility Class)
Tai Leng သျှမ်းနီ စော်ဘွားများသည် Golden Tiger (Hkam Hso) ရွှေရောင်ရှိသော ကျား အမည်ကုို ခံယူသည်။ စော်ဘွား အခြေစုိုက်နေထုိုင်ရာနေရာကုို (Haw) (ဟော်) ၊ ဟုခေါ်သည်။
၃. မြောက်ဖက်အရပ်မှ တုိုက်ခုိုက်လာမည့် ရန်ကြောင့် ယူနန်တောင်ဖ်နုင့် အနောက်ဖက်ကုို ရွှေ့ပြောင်းသည်။ ပထမအကြိမ်ရွှေ့ပြောင်းသော (Tai Long/ Great Tai) သျှမ်းကြီးများ၊ နောက်အကြိမ် ရွှေ့ပြောင်းသော ( Tai Noi/ Little Tai) သျှမ်းကလေးများဟူ၍ နှစ်မျိုးအနက် သျှမ်းကများရွှေ့ပြောင်းမှုက သမုိုင်းတွင် ပုို၍အရေးပါသည်။
AD.750 ၌ နန်ချောင်ဘုရင် ကူလူဖန် (Ko-lo-feng) လက်ထက်တွင် ပျူနုိုင်ငံကုို ဖြတ်သော အန္ဒိယ၊ ယူနန်သွားရာလမ်း များစွာပွင့်သွားသည်။
AD.(1413-1445/6) တွင် မုိုးကောင်းစော်ဘွား (စော်ဘွားဟူသော စကားသည် သျှမ်းလုို စောက်ဖှ မြန်မာပြန်သော မြေကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကုို စုိုးမုိုးသောသခင်) သုိုငံဘွား (Sao Ngan Pha/ Hso Wen Hpa) ဖြစ်သည်။ ၎င်းလက်ထက်တွင် ယူနန်အနာက်ပုိုင်းကုို ထိပါးသဖြင့် တရုတ်တုို့နှင့် စစ်ဖြစ်သည်။ မင်မင်းဆက် (Mai Dynaty) သမုိုင်းအရ ၀မ်ချီ (ဆင်ရွှေဝင်း- မှန်နန်း) စစ်သူကြီးသည်
AD(1787-1795)တွင် စောဖြူညီ စောကျော်က ဟောနန်းသက် ၈နှစ်ဖြစ်၏ AD(1795-1810)တွင် စော်ဟော်ခန်း၏ညီ စောခုိုင်သည် မုိုးကောင်းဟော်နန်းကုို သား၊ မြေးများ အကူညီနှင့် ပြန်ဆက်ခံသည်။ ၎င်းလက်ထက်တွင် တတိယမြောက်မုိုးကောင်းမြို့ ပျက်စီးသည်။
လွှဲလော ရွှေကျောင်း ဆရာတော်၏ လက်ရေးမှုအရ ယင်းနေရာ မုိုင်းကောင်း၊ ကားမုိုင်းလမ်းနှင့် မြစ်ကြီးနား၊ မန္တလေး ကားလမ်းဆုံရာတွင် ဖြစ်သည်။ ယနေ့တုိုင် မုိုးကောင်းမြို့ဟောင်းဟု ခေါ်ဆုိုနေကြပါသည်။ ယခုမုိုးကောင်းနှင့် ၈မုိုင်ခန့်အကွားတွင်ရှိသည်။ မုိုးကောင်းစော်ဘွား ၂၉ ဆက် ဆက်ခဲ့သည်။
၎င်းစော်ဘွားလွန်သော စော်ဘွားဆက်ပြတ်ပြီး မြို့ဝန် (၅၄ ဆက်)ကုို မြန်မာဘုရင်က တုိုက်ရုိုက်ခန့်ထား အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ AD(1883)တွင် စော်ဘွား စော်ဟော်ခန်း၏ အဆက်အနွယ်မှ မောင်ရွှေလီ ဦးဆောင်၍ ပုန်ကန်ရာ တိုိုင်းလျဲန်မျိုးနွယ် ၀န်းသုိုစော်ဘွား ဦးအောင်မြတ် နှိမ်နှင်းနုိုင်သဖြင့် သုိုဟုံဘွားဘွဲ့ကုို သီပေါဘုရင်မှ ချီးမြင့်ပေးအပ်သည်။ ထုိုသုို့နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနားဒေသတွင် တုိုင်းလျှဲန်ရွာများ ဖျက်ဆီးခံထားရပြီး
မိုးကောင်းမြို့ကို ရှေးယခင်းက မိန်းကောင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ “မိန်းကောင်း” (Ming Gawng) သျှမ်းဘာသာ စကားဖြစ်သည်။ မိန်းသည်= မြို့တော် ဟုအဓိပ္ပါယ် ရပြီး ကောင်းမှာ = အိုးစည် ဟုအဓိပ္ပါယ် ရသဖြင့် မိန်းကောင်း ကို“အိုးစည်မြို့တော်” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ ကာလကြာ လာသောအခါို“မိန်းကောင်းမှ မိုးကောင်းဟုို“ တွင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စတုတ္ထမိုးကောင်းမြို့ကို ကောဇာ(၁၁၅၃)ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း (၁၂)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ နံနက် အာရုဏ်တက်ချိန် တွင် မြို့ဟောင်း စော်ဘွားကြီး၏သား စောက်မောင်ဆိုင် နန့်ရင်းချောင်းနှင့် နန့်ကောင်းဆုံရာတွင် မြို့စတင် တည်ခဲ့ပါသည်။ မိုးကောင်းမြို့သည် ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၁၅၃)ခုနှစ်ကို မှတ်သားရ လွယ်ကူစေရန် “အိမ်အောက်မြစိမ်း မိုးကောင်းကိန်း” ဟုစပ်ဆိုခဲ့ပါသည်
ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းများ၌ တွေ့ရသော သိုဟန်ဘွားမင်းစော(ဆိုခန်ဖှ) သည်တစ် ဦးတည်း မဟုတ်ဘဲ နာမည်တူများ (ဆိုမိသားစုမင်းမျိုးနွယ်စုဝင်များ) ဖြစ်ကြပြီး၊ သက္ကရာဇ်ကာလအားဖြင့် ကွဲပြား၏။ နန်ချို သျှမ်းဧကရာဇ်မင်းဆက်(AD 650-1252 ) နှောင်း၌တစ်ဦး၊ မောသျှမ်းတိုင်းပြည် စယ်လန့် ဧကရာဇ်မင်းဆက်(AD 1300-1772 ) ၌တစ်ဦး၊ မိုးညှင်းမင်းတရားကြီး စ၀်စောလုံ၏သား အာဝနန်းရှင် သိုဟန်ဘွား(AD 1505-1547 ) ကတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့အားလုံးသည် “ဆို” မင်းနွယ်ဝင်များမှ ဖြစ်ကြပါသည်။
နန်ချို ဧကရာဇ်(ရှစ်ရာစု) လည်းရောက်ခဲ့သည်။ (AD 1321 ) ကာလ၊ မောသျှမ်းဧကရာဇ် သိုဟန်ဘွားကိုယ်စား သူ၏ ညီတော် စ၀်ဆမ်လုံး သွားရောက်ခဲ့သည်။ အသွားအပြန် ခရီးသုံးနှစ် ကြာခဲ့သည်။ စ၀်ဆမ်လုံသည် အပြန်ခရီး မိုးကောင်း(Mong Kong )၌ တစ်ထောက်နားစဉ် အဆိပ်မိ၍ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သူ၏နောက်လိုက် စစ်တပ်ဗိုလ်ပါ ပေါင်းသည် မောသျှမ်းဧရာဇ်ပြည် စယ်လန့်သို့မ ပြန်ကြတော့ဘဲ ရောက်ရာနေရာ၌ပင် မြို့တည်လယ်လုပ်၍ နေထိုင်လာကြတော့သည်။
ယခု မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မိုးမိတ်၊ ၀န်းသုို ဟုခေါ်တွင်လျှက်ရှိသော သျှမ်းမျိုးနွယ်စုများ၏ မြို့ပြ နုိုင်ငံငယ်များသည် နှစ်ပေါင်းသုံးထောင် နီးပါးရှိပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဤနယ်ဒေသတုို့ သျှမ်းမျိုးနွယ်စုများ ၀င်ရောက် နေထုိုင်လာခဲ့သည်မှာလည်း နှစ်ပေါင်း သုံးထောင်ထက် မနည်းတော့ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။
စာရေးသူ ကျားပေါက် ငယ်စဉ်က ယခုမုိုးကောင်းမြို့ ဘုံသားကျောင်း ဆရာတော် ဦးမေဒါမှ ကြီးမှုးကျင်းပသော မုိုးကောင်းမြို့ ရာတုလေးလီ ရာလေးလီ ပွဲတော်ကြီးတွင် ရှင်လောင်း အပါးတထောင်ကျော် ရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲတော်ကြီး ကျင်းပပေးခဲ့ပါသည်။
အထက်မြန်မာနုိုင်ငံရှိ ရှေးဟောင်းမြို့ပြ နုိုင်ငံငယ်များ၊ ရှေးဟောင်း သျှမ်းမင်းပြည်ထောင်များ ဖြစ်သော တကောင်း၊ မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးမိတ်၊ ၀န်းသုို၊ ကလေး၊ မော်လုိုက်၊ ဟုမ္မလင်း၊ မောင်းခမ်း၊ တမန်သီ၊ သောင်သွတ်၊ ဆင်းကလိန်းခန္တီး၊ ဗန်းမော်၊ ခတ်ချို၊ ၀ုိုင်းမော်၊ ခမ်းတီးလုန် (ပူတာအုို) ဖားကန့် ၊ ကားမုိုင်း စသည့် အမည်များမှာ ဒေသခံ သျှမ်းလူမျိုးများ အစဉ်ဆက် သျှမ်းဘာသာဖြင့် အမည်သတ်မှတ်ခေါ်တွင် ခဲ့သည်ကုို တွေ့ရှိရပါသည်။
သျှမ်းညီနောင်သုံးဦး တည်ထောင်ခဲ့သော မြို့သုံးမြို့တွင်း မိန်းကောင်း ခေါ် မုိုးကောင်းမြို့သည် အကြီးဆုံး မြို့ဖြစ်ပြီး အရံမြို့ငယ် ၉၉ မြို့ရှိကြောင်းသိရသည်။
ရှေ့ခေတ်သျှမ်းလူမှုအဖွဲ့စည်း သျှမ်းနုိုင်ငံတော်များ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံ မုိုးကောင်းမြို့ တောင်ပေါ်ကျောင်း ဆရာတော်ကြီး က သက္ကရာဇ် ၁၂၆၃ ခုနှစ် ပထမ၀ါဆုို လဆန်း ၄- ရက်နေ့တွင် စတင်ရေးသားသည့် ဥတ္တရဂုရုဥတီရဌ ခေါ် မောကုိုးပြည်ထောင် သမုိုင်းမှတ်တမ်းတွင်
- အလယ်ပုိုင်း နုိုင်ငံတော်တွင် နေထုိုင်ကြသော တုိုင်းကမ်ခေါ် တုိုင်းခွမ်သည်။ ညီအကုိုသုံးဦးတွင် အလတ်ဖြစ်ပြီး အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ ခေါင်းပေါင်း အနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ကြသည်။
- အနောက်ပုိုင်း နုိုင်ငံတော်တွင် နေထုိုင်သော တုိုင်းလျဲန်ခေါ် သျှမ်းနီတုို့သည် ညီအကုို သုံးဦးတွင် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အသားအရောင် နီစပ်စပ်ရှိ၏ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ ခေါင်းပေါင်း အနက်ရောင် ၀တ်ဆင်ကြသောလည်း အနားပတ်မှာ အနီရောင်တပ် ၀တ်ဆင်ကြခြင်းကြောင့် တုိုင်းလျဲန် အမည်တွင်ခဲ့သည်။ အခြားမှတ်တမ်းများအရ တုိုင်းလျဲန်တုို့သည် စစ်တုိုက်ရာနုိုင် ရဲရင်ကြပြီး ခေါင်းပေါင်း ခါးစည်း၊ အင်္ကျီဘောင်ဘီ အနားပတ် အနီရောင်ကုို ၀တ်ဆင်ကြသည့် သျှမ်းစစ်တပ် တတပ်၏ အမည်နာမှဟုလည်း ဆုိုသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံမှုကြမ်း ရေးဆွဲစဉ်ကာလက ဦးစောထွန်းရင်သည် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တိုင်းလျဲန်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသား တဦးဖြစ်ပါသည်။